C/raxmaan Cabdishakuur "Wixii hadda kaddib nasoo gaara waxaa loo heystaa Madaxweyne Farmaajo" VIDEO.
Sunday December 24, 2017 - 10:39:00 in Wararka by Super Admin
Siyaasiga Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur oo shalay gelinkii dambe shir Jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa si kulul u weeraray Hoggaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya oo uu ku tilmaamay kuwa fashilmay.
isagoo warbaahinta kula hadlayay xarunta Xisbiga Wadajir ayuu sheegay in weerarkii gurigiisa lagusoo qaaday isbuucii lasoo dhaafay lagasoo abaabulay madaxtooyada wuxuuna dhibaatadii dhacday dusha uga tuuray Kheyre iyo Farmaajo.
Wuxuu sheegay in weerarka lagusoo qaaday ujeedku uu ahaa in ladilay madaxda Xisbiga Wadajir basle uu ka badbaaday isku daygaasi dil, isagoo hadalkiisa sii wata ayuu si gaar ah u eedeeyay Agaasimaha madaxtooyada iyo Farmaajo oo uu sheegay in si dhow ula socdeen howlgalkii lagu qaaday.
"Weerarkii nagula soo qaaday Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha iyo Agaasimaha Madaxtooyada wax bey ka ogaayeen, daqiiqad daqiiqad ayay isgaarsiinta Ciidamada ugala socdeen, wuxuu ahaa weerar la rabay in nagula khaarijiyo”ayuu yiri C/raxmaan C/shakuur..
Siyaasigan khilaafka siyaasadeed ka dhax abuuray dowladda Federaalka ayaa markale ku celiyay in wixii dhib ah ee isaga gaara hadda kadib uu mas'uul ka yahay Farmaajo wuxuuna muujiyay heerka uu gaaray khilaafka kala dhaxeeyo Villa Somalia.
"Wixii hadda kadib na soo gaara iyo dhiiggeena waxaa loo heystaa Maxamed C/llaahi Farmaajo”ayuu hadalkiisa sii raaciyay C/raxmaan Cabdi Shakuur.
Halkan ka Daawo Video-ga ama Hoose Ka eeg